Mapikicha okuBritain Chikamu 1 (January Kusvika August 2015) | JW.ORG
Hofisi yebazi reZvapupu zvaJehovha rekuBritain iri kutamiswa kubva kuMill Hill, muLondon, kuenda kunzvimbo iri kumabvazuva kweLondon nemakiromita 70, pedyo neguta reChelmsford, mupurovhinzi yeEssex. Kubva muna January kusvika muna August 2015, vashandi vaigadzira nzvimbo dzichaitirwa mabasa anozotsigira basa rekuvaka.
23 January 2015—Zvakaita nzvimbo yacho
Pashure pekunge vapiwa mvumo nekanzuru yemunzvimbo yacho, vashandi vakabvisa miti yavainge vatema kuitira kuti vawane pekushandira. Vakashanda nesimba kuti vapedze basa iroro mwaka wekuti shiri dzitange kugadzira matendere nekukandira mazai usati wasvika. Vari kuchengeta mapango emiti yacho kuti azoshandiswa pabasa rekuvaka, uye zvinenge zvasara zvinobva zvagayiwa kuita mafufu anozoiswa mutunzira twekufambira.
30 January 2015—Imba yekudyira iri panoitirwa mabasa anotsigira kuri kuvakwa
Mushandi ari kuisa mapuragi ekubayirira tambo dzemasikirini ekuonera mavhidhiyo muchivako chaimbova hotera. Chivako chacho chava kugadziridzwa kuti chive kicheni uye imba yekudyira. Masikirini acho ndiwo achashandiswa nevashandi pakuona mapurogiramu ezvekunamata akadai sekunamata kwemangwanani neChidzidzo cheNharireyomurindi zvinoitwa nemhuri yeBheteri.
23 February 2015—Zvakaita nzvimbo yacho
Vashandi vari kuisa fenzi ichange yakapoteredza zvikamu zvakakura zvenzvimbo yacho iri kuvakwa. Sezvo nzvimbo yacho iri kumapurazi, pane zviri kuitwa kuti basa racho rekuvaka risanyanya kukanganisa mhuka dzemusangano dziri munzvimbo yakapoteredza. Semuenzaniso, nechepasi pefenzi pakasiyiwa nzvimbo yakavhurika nemasendimita 20, kuitira kuti tumhuka twakaita sembira tunenge tuchida kufamba-famba tuchitsvaka zvekudya usiku tukwanise kuramba tuchipinda nekubuda.
Vashandi vari kugadzira mugwagwa unobatanidza nzvimbo yekugara ichaitirwa mabasa ekubatsira pakuvaka, nenzvimbo yacho chaiyo ichavakirwa hofisi yebazi.
5 March 2015—Zvakaita nzvimbo yacho
Pikicha yezvakaita nzvimbo yacho tichibva kumabvazuva, ichiratidza mugwagwa wekumbofanoshandisa wakatopera kugadzirwa. Sezviri kuratidzwa nechekumusoro kurudyi, mugwagwa wacho unoenda kunzvimbo iri kuvakwa. Zvimwe zvivako zviri kuratidzwa nechepasi kuruboshwe zviri kugadzirwa kuti zvive nemakamuri achagarwa nevashandi. Dzimwe dzimba dzekugara dzichaiswa panzvimbo dziri pedyo.
20 April 2015—Nzvimbo ine dzimba dzekugara, iri kunoitirwa mabasa ekutsigira kuvaka
Mumwe wehama dziri muDare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha pamwe chete nemumwe wevamiririri vemahofisi makuru, vakashanyira vashandi vari kuita basa racho rekuvaka. Pava paya vhiki iroro, kwakaitwa musangano unokosha uye wakaita zvekutepfunyurwa kuti vaiva kuDzimba dzoUmambo dzese dzemuBritain neIreland vaone. Pakapiwa chiziviso chekuti nezuro wacho manheru, Chelmsford City Council yakanga yapa mvumo yekuti basa racho ritange.
13 May 2015—Nzvimbo inoitirwa mabasa ekutsigira kuri kuvakwa
Vashandi vari kugadzira pekupfuura napo vachiisa zvinodzivirira midzi yemiti miviri yakura iripo inonzi mioak. Ipapo ndipo panofambwa napo kubva kunzvimbo inoitirwa mabasa ekutsigira kuri kuvakwa kuenda kuri kuvakwa kwacho, zvekuti kunyange marori anenge akatakura zvinorema anokwanisa kupfuura asingakanganisi midzi yemiti yacho.
21 May 2015—Nzvimbo ine dzimba dzekugara, iri kunoitirwa mabasa ekutsigira kuvaka
Vashandi vari kuchera munofamba nepombi dzemvura, tambo dzemagetsi nezvimwewo zvepadzimba dzekumbofanogara dziri kuvakwa. Nechekumashure kune dzimba 50 dzekutanga dzichagarwa nevashandi panguva inenge ichiitwa basa rekuvaka.
16 June 2015—Nzvimbo ine dzimba dzekugara, iri kunoitirwa mabasa ekutsigira kuvaka
Mushandi ari kuisa pombi dzemvura pane imwe yedzimba dzekumbofanogara.
Pikicha yakatorerwa kumabvazuva kwenzvimbo yacho, ichiratidza dzimba dzekumbofanogara dzainge dzichangobva kugadzirwa. Nechekumberi, kune mafaundesheni edzimba dzekugara, dzichiri kugadzirwa. Nechekuruboshwe, kune zvimwe zvivako zviri panzvimbo yacho, kusanganisira imba yekudyira yevashandi vanovaka. Bazi richavakirwa panzvimbo yatiri kuona iri kumashure nechepakati papikicha yacho.
Mukadzi ari kubatanidza tambo dzeIndaneti dzinonzi fiber-optic mukamuri rine michina yekufambisa mashoko. Paifanira kutanga pava nenetiweki yemakombiyuta neIndaneti kuitira kuti zvizova nyore kuronga mabasa ese ane chekuita nekuvaka, kukurukura nemamwe mapazi, uye pakuronga zvimwe zvinenge zvichida kuitwa vachibatsirwa nevari kumahofisi makuru.
6 July 2015—Zvakaita nzvimbo yacho
Mushandi ane muchina weGPS waari kushandisa pakuyera nzvimbo iri kuda kucherwa migero. Migero yacho inobatsira vanochera matongo kuti vaongorore nzvimbo yacho basa rekuvaka risati ratanga. Kunyange zvazvo nharaunda iri pedyo neChelmsford yaimbogarwa neVaRoma, migero 107 iyo yakacherwa pachitanga kuongororwa nzvimbo yacho, haina kana chine musoro chayakabura.
6 July 2015—Nzvimbo inoitirwa mabasa ekutsigira kuri kuvakwa
Kucheka simbi dzekugadzirisa mafuremu emadhoo kuti dzikwane padziri kuda kuiswa. Zvimwe zvivako zvepanzvimbo inoitirwa mabasa ekutsigira kuri kuvakwa zviri kugadziridzwa kuti zvive dzimba dzekuitira mabasa (workshops). Mahofisi ekumbofanoshandisa nezvimwe zvinodiwa pakutsigira basa rekuvaka, zvichange zviriwo panzvimbo iyi.
Kuisa ivhu murori inorasa marara, kuti rizoshandiswa kuvhara makomba anenge asara panoiswa mapaipi kana kuti faundesheni.
7 July 2015—Zvakaita nzvimbo yacho
Pikicha yakatorerwa nechekumaodzanyemba, ichiratidza zvakaita nharaunda yakapoteredza nzvimbo yakakura maeka 85 iyo iri kuda kuvakirwa bazi. Pane mugwagwa mukuru uri pedyo (hausi kubuda papikicha). Uri mumugwagwa iwoyo, unokwanisa kuenda kunosvikira zvikepe, kunhandare dzendege uyewo kuguta reLondon.
23 July 2015—Zvakaita nzvimbo yacho
Vashandi vakahayiwa vari kudhiriza zvivako zvagara zviripo kuitira kuti vachenese nzvimbo ichavakirwa bazi.
20 August 2015—Nzvimbo inoitirwa mabasa ekutsigira kuri kuvakwa
Muchina unokwanisa kutakura zvinhu zvinorema matani 60, uri kuburutsa chimba chesimbi uchichiisa pachinofanira kuiswa. Nechepamberi pakatoiswa mafaundesheni ekuzogadzikira zvimwe zvimba zvesimbi. Zvimba izvi zvichazoshandiswa semahofisi ekurongera mabasa anenge achizoitwa pakuvaka.
Vanenge vashanya vanobvumirwa kutenderera vachiratidzwa chero imwe yemahofisi edu ebazi. Tinokukoka kuti uitewo kudaro!